Ifulethi laseLa Villa Jasmin eduze kwase-Oliviers
Montauroux, Provence-Alpes-Côte d'Azur, i-France
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Bastien
U-100% wezivakashi zakamuva unikeze u-Bastien izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
IVilla Jasmin itholakala eMontauroux, idolobhana elihle, enhliziyweni yeProvence, indawo enhle kakhulu, indawo yokuhlala ekhethwe nguChristian Dior. I-Villa yethu ebukekayo ibekwe endaweni eluhlaza okotshani, ezolile ngokuphelele. Woza uzozitholela nomndeni noma abangani ubukhazikhazi bendlu yethu kanye nokungenisa izihambi komndeni wethu. Bhukha manje amaholide akho ongawakhohlwa e-Provence.
Ifulethi elingasohlangothini lwe-Oliviers, njengoba igama layo lisho, libhekene ne-Oliviers. Ifulethi lifakwe umbhede ongu-140x200 nomatilasi wegwebu lenkumbulo entsha sha, olungele ukuphumula. Umbhede ungafakwa ngesicelo. Ingahlala abantu abangafika kwabangu-3. Umhlobiso wayo wangaphakathi weProvencal ongacabangi futhi ongaphelelwa yisikhathi uzokwenza amaholide akho angalibaleki. Ifulethi linethala elizimele elibheke izihlahla zomnqumo ezinhle. Ungajabulela ingadi yethu egcwele abantu kanye nezindawo zokuhleba ezipholile, i-bowling alley enephunga nezinye izinsiza eziningi.
I-Villa Jasmin itholakala e-Montauroux endaweni eluhlaza ngokuzola okuphelele. Kufudumele ebusika, kuphole ehlobo, phakathi kwezihlahla zomnqumo ezineminyaka eyikhulu ubudala endaweni ebizwa ngokuthi i-Little Africa ngenxa yesimo sezulu esipholile ngaso sonke isikhathi sonyaka.
Sisemandleni akho ukukwazisa ngemisebenzi yesifunda, ukukusiza nokukusiza. Jabulela iholidi lakho, sikhona uma kudingeka.
Hlola ezinye izinketho ezise- Montauroux namaphethelo